Ndị Izrel ruru n’Oké Osimiri Uhie (1-4)
Fero chụwara ndị Izrel (5-14)
Ndị Izrel gafere Oké Osimiri Uhie (15-25)
Oké osimiri riri ndị Ijipt (26-28)
Ndị Izrel nwere okwukwe na Jehova (29-31)
14 Jehova gwaziri Mosis, sị: 2 “Gwa ndị Izrel ka ha laghachi azụ maa ụlọikwuu n’ihu Paịhahaịrọt, n’agbata Migdọl na oké osimiri, n’ebe chere Bel-zifọn ihu.+ Unu ga-ama ụlọikwuu n’akụkụ oké osimiri ahụ, chee Bel-zifọn ihu. 3 Fero ga-ekwu banyere ndị Izrel, sị, ‘Ha na-awagharị n’ala a n’amaghị ebe ha ga-aga aga. Ha atọla n’ala ịkpa.’ 4 M ga-ekwe ka obi Fero kpọchie,+ ọ ga-achụwakwa ha. M ga-emeri Fero na ìgwè ndị agha ya niile, ka m wee wetara onwe m otuto.+ Ndị Ijipt ga-amarakwa na m bụ Jehova.”+ Ha wee mee otú ahụ. 5 E mechara kọọrọ eze Ijipt na ndị Izrel agbaala ọsọ. Ozugbo ahụ, obi Fero na ndị na-ejere ya ozi gbanwere.+ Ha wee sị: “Gịnị mere anyị ji mee ihe a ma hapụ ndị Izrel ka ha kwụsị ịgbara anyị ohu?” 6 Fero wee kwadebe ụgbọ ịnyịnya agha ya, kpọrọkwa ndị agha ya.+ 7 O ji narị ụgbọ ịnyịnya isii (600) ndị kacha mma na ụgbọ ịnyịnya niile ndị ọzọ e nwere n’Ijipt, kpọrọkwa ndị agha ga-anọkwasị na nke ọ bụla n’ime ha. 8 Jehova si otú a kwe ka obi Fero, eze Ijipt, kpọchie. O wee chụwa ndị Izrel ka ndị Izrel ji obi ike na-apụ.*+ 9 Ndị Ijipt chụwara ha.+ Ụgbọ ịnyịnya Fero niile na ndị agha ịnyịnya ya nakwa ndị agha ya chụkwutewere ndị Izrel mgbe ha nọ n’ebe ha mara ụlọikwuu n’akụkụ oké osimiri, n’akụkụ Paịhahaịrọt, chee Bel-zifọn ihu. 10 Mgbe Fero rutekwuru nso, ndị Izrel leliri anya hụ na ndị Ijipt na-achụ ha. Egwu tụrụ ndị Izrel, ha amalite ibesara Jehova ákwá.+ 11 Ha sịrị Mosis: “Ọ̀ bụ maka na e nweghị ebe a na-eli ozu n’Ijipt mere i ji kpọta anyị ebe a ka anyị nwụọ n’ala ịkpa?+ Gịnị bụ ihe a i mere anyị? Gịnị mere i ji kpọpụta anyị n’Ijipt? 12 Ọ̀ bụ na anyị agwaghị gị agwa n’Ijipt, sị, ‘Hapụ anyị ka anyị jewere ndị Ijipt ozi’? N’ihi na ọ kaara anyị mma ijere ndị Ijipt ozi kama ịnwụ n’ala ịkpa.”+ 13 Mosis wee sị ndị Izrel: “Unu atụla egwu.+ Nweenụ obi ike ka unu hụ otú Jehova ga-esi zọpụta unu taa.+ N’ihi na ndị Ijipt a unu na-ahụ taa, unu agaghị ahụ ha ọzọ.+ 14 Ọ bụ Jehova ga-alụrụ unu agha,+ ma unu ga-agba nkịtị.” 15 Jehova gwaziri Mosis, sị: “Gịnị mere i ji na-ebesara m ákwá? Gwa ndị Izrel ka ha kwalie. 16 Weliekwa mkpara gị, setịa aka gị n’elu oké osimiri ka o kewaa, ka ndị Izrel wee si n’etiti oké osimiri, n’ala nkịtị, gafere. 17 Ma m ga-ekwe ka obi ndị Ijipt kpọchie, ka ha wee chụrụ ha gawa. M ga-emeri Fero na ndị agha ya niile, ụgbọ ịnyịnya agha ya, na ndị agha ịnyịnya ya, ka m si otú a wetara onwe m otuto.+ 18 Ndị Ijipt ga-amarakwa na m bụ Jehova mgbe m ga-emeri Fero, ụgbọ ịnyịnya agha ya, na ndị agha ịnyịnya ya, wee wetara onwe m otuto.”+ 19 Mmụọ ozi nke ezi Chineke,+ onye na-ebutere ndị Izrel ụzọ, pụrụ gaa n’azụ ha. Ogidi ígwé ojii ahụ nke dị n’ihu ha gara n’azụ wee guzoro n’azụ ha.+ 20 O wee dịrị n’agbata ndị agha ndị Ijipt na ndị Izrel.+ N’otu akụkụ, ígwé ojii ahụ gbara ọchịchịrị. N’akụkụ nke ọzọ, ọ na-enye ìhè n’abalị.+ N’ihi ya, ndị Ijipt abịarughị ndị Izrel nso n’abalị ahụ niile. 21 Mosis setịrị aka ya n’elu oké osimiri ahụ.+ Jehova wee jiri oké ifufe nke si n’ebe ọwụwa anyanwụ mee ka oké osimiri ahụ laghachi azụ n’abalị ahụ niile, nke mere ka ala oké osimiri ahụ bụrụzie ala nkịtị.+ Mmiri ahụ wee kewaa.+ 22 Ndị Izrel wee si n’etiti oké osimiri ahụ, n’ala nkịtị, gafere.+ Mmiri ahụ dị ka mgbidi n’aka nri ha nakwa n’aka ekpe ha.+ 23 Ndị Ijipt chụwara ha. Ịnyịnya Fero niile, ụgbọ ịnyịnya agha ya, na ndị agha ịnyịnya ya chụụrụ ha banye n’etiti oké osimiri ahụ.+ 24 N’oge nche ụtụtụ,* Jehova si n’ogidi ọkụ na ígwé ojii ahụ+ lee ndị agha Ijipt anya, o wee tinye ndị agha Ijipt n’ọgba aghara. 25 Ọ nọkwa na-ahịọpụsị ụkwụ ụgbọ ịnyịnya ha, nke mere ka o siere ha ike ịgba ha. Ndị Ijipt nọkwa na-asị: “Ka anyị si n’ebe ndị Izrel nọ gbapụ, n’ihi na Jehova na-agbachitere ha, na-alụso anyị bụ́ ndị Ijipt ọgụ.”+ 26 Jehova gwaziri Mosis, sị: “Setịa aka gị n’elu oké osimiri a ka mmiri ya lọghachi rikpuo ndị Ijipt, ụgbọ ịnyịnya agha ha, na ndị agha ịnyịnya ha.” 27 Ozugbo ahụ, Mosis setịrị aka ya n’elu oké osimiri ahụ. Mgbe chi bọwara, oké osimiri ahụ lọghachiri otú ọ dịbu. Mgbe ndị Ijipt nọ na-agbapụta, Jehova tụbara ndị Ijipt n’etiti oké osimiri ahụ.+ 28 Mmiri ahụ nke na-alọghachi kpuchiri ụgbọ ịnyịnya agha ndị ahụ na ndị agha ịnyịnya nakwa ndị agha Fero niile bụ́ ndị chụụrụ ha banye n’oké osimiri.+ E nweghị otu onye n’ime ha fọrọ ndụ.+ 29 Ma ndị Izrel gara ije n’ala nkịtị, n’etiti ala oké osimiri ahụ.+ Mmiri ahụ dị ka mgbidi n’aka nri ha nakwa n’aka ekpe ha.+ 30 Jehova si otú a zọpụta ndị Izrel n’aka ndị Ijipt n’ụbọchị ahụ.+ Ndị Izrel wee hụ ka ndị Ijipt nwụrụ n’ụsọ oké osimiri. 31 Ndị Izrel hụkwara nnukwu ike Jehova kpara wee bibie ndị Ijipt. Ndị Izrel maliteziri ịtụ egwu Jehova na inwe okwukwe na Jehova nakwa na Mosis ohu ya.+
^ Na Hibru, “ndị Izrel weliri aka elu na-apụ.”
^ Ya bụ, n’ihe dị ka elekere abụọ n’ime abalị ruo n’elekere isii ụtụtụ.